Olee Otú Ndị Nlekọta Sekit Si Enyere Ọgbakọ Ndịàmà Jehova Aka?
Ha na-ahazi ndị pụtara ozi ọma
Ha na-eso anyị aga ozi ọma
Ha na ndị okenye na-enwe nnọkọ
N’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst, e kwuru ọtụtụ ihe gbasara Banabas na Pọl onyeozi. Ha bụ ndị okenye, ndị na-aga eleta ọgbakọ ndị e nwere n’oge ahụ. Gịnị mere ha ji aga eleta ha? Ọ bụ maka na ha chọrọ ka ụmụnna ndị nọ n’ọgbakọ ndị ahụ na Chineke na-adị ná mma. Pọl gwara Banabas ka ha “laghachi gaa leta ụmụnna,” ka ha hụ otú ha mere. Ha abụọ kwo maka ileta ụmụnna ha gaa ebe ndị dị ezigbo anya. N’ọgbakọ ọ bụla ha ruru, ha agbaa ụmụnna ha ume ma mee ka okwukwe ha sikwuo ike. (Ọrụ Ndịozi 15:36) Ọ bụkwa otu ihe ahụ mere ndị anyị na-akpọ ndị nlekọta na-ejegharị ejegharị ji aga eleta ọgbakọ anyị taa.
Ha na-abịa agba anyị ume. Onye nlekọta sekit ọ bụla na-aga eleta ihe dị ka ọgbakọ iri abụọ. Ọ na-eleta ọgbakọ nke ọ bụla ugboro abụọ n’afọ. Ọ na-anọkwa otu izu ma ọ gaa ileta ha. Anyị na-amụta ọtụtụ ihe n’aka ha nakwa n’aka ndị nwunye ha, ma ọ bụrụ na ha lụrụ nwaanyị. Ha na ndị nwunye ha na-agbalị ịmata ma ndị na-eto eto ma ndị agadi nọ n’ọgbakọ. Ha na-esokwa anyị aga ozi ọma. Ha na-eso ndị okenye aga eleta ụmụnna ndị e kwesịrị inyere aka. Ihe ndị ha na-akụziri anyị ma ha bịa ileta anyị na ihe ha na-akụzi ma anyị gaa mgbakọ na-agba anyị ume.​—⁠Ọrụ Ndịozi 15:⁠35.
Ha hụrụ mmadụ niile nọ n’ọgbakọ n’anya. Ha na-enyere ọgbakọ aka ka ha na-eme nke ọma n’ofufe Chineke. Ha bịa ileta ọgbakọ, ha na ndị okenye na ndị ohu na-eje ozi na-anọkọ leba anya n’otú ihe si na-aga. Ha na-agwakwa ha ihe ndị ha ga-eme ka ha nwee ike na-arụkwu ọrụ ha nke ọma. Ha na-agwa ndị ọsụ ụzọ ihe ndị ga-enyere ha aka ịna-aga ozi ha nke ọma. Ha na-agbakwa mbọ mata ndị ọhụrụ na-abịa ọmụmụ ihe anyị ma chọpụta otú ha si na-eme n’ọgbakọ. Ndị nlekọta na-ejegharị ejegharị na-eji obi ha niile arụ ọrụ ha. Baịbụl kpọrọ ha ndị ọrụ ‘ibe anyị maka ọdịmma anyị.’ (2 Ndị Kọrịnt 8:23) Anyị kwesịrị iṅomi okwukwe ha.​—⁠Ndị Hibru 13:⁠7.
Gịnị mere ndị nlekọta sekit ji aga eleta ọgbakọ?
Olee ihe i nwere ike ime ka ọbịbịa ha baara gị uru?
Chọpụta ụbọchị onye nlekọta sekit ga-abịa. Gaa na kalenda gị kaa akara n’ụbọchị ahụ, ka i nwee ike icheta gaa gere okwu ọ ga-ekwu n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka yanwa ma ọ bụ nwunye ya soro onye gị na ya na-amụ ihe bịa mụọrọ gị ihe n’izu ahụ, gwa onye ahụ gị na ya na-amụ ihe.
Anyị na-eme ihe Jizọs mere mgbe ọ nọ n’ụwa. Olee otú anyị si ekwusa ozi ọma?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Ọrụ Ndị Nlekọta Sekit?